हाम्रो उत्तम प्रदर्शन ईमेल अप्ट-इन रणनीति कहिल्यै | Martech Zone
हाम्रो उत्तम प्रदर्शन ईमेल अप्ट-इन रणनीति कहिल्यै
आइतवार, फेब्रुअरी,, २०१ 21 सोमबार, फेब्रुअरी 22, 2016 Douglas Karr
My मार्केटिंग पोडकास्ट सहकर्मी, एरिन स्पार्क्स, मलाई हाम्रो अप्ट-इन रणनीति को बारे मा कडा समय दिन मन पराउँछन् Martech Zone। हामीले के जाँच्यौं र के काम गर्छौं भनेर कुरा गर्नु अघि मैले ईमेलको महत्त्व बुझाउनु पर्छ। यदि तपाइँ एक अनलाइन प्रकाशनलाई एउटा मेसिनको रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने, ईमेल ठेगानाहरू क्याप्चर गर्दै छन् - टाढा - बाट सब भन्दा कुशल तरीका तपाइँको साइट मा प्रासंगिक आगन्तुकहरु फिर्ता फर्कने।
वास्तवमा, म जहाँसम्म भन्छु कि तपाईंको ईमेल ठेगाना सूची तपाईंको साइटले गर्न सक्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण र ध्वनी रणनीति हो। यो किन हामीले हाम्रो निर्माण गरे WordPress को लागी ईमेल सेवा। तपाईंको साइटमा बढ्दो ग्राहक आधार हो उत्तम मेट्रिक तपाईंको सामग्रीको स्वास्थ्य र संलग्नतालाई पहिचान गर्नका लागि। जब एक आगन्तुकले सदस्यता लिन्छ र तपाईंलाई उनीहरूको इनबक्समा स्वागत गर्दछ (जुन सायद नै भरिएको छ), यसको मतलब तिनीहरू तपाईंको संगठनले ल्याउने मूल्यमा विश्वास गर्छन्।
स्वागत चटाई प्रस्तुत गर्दै
हामीले प्रयास गर्न धेरै टन विभिन्न उपकरणहरू परीक्षण गरेका छौं हाम्रो आगंतुकको ईमेल ठेगानाहरू लिनुहोस् हाम्रो न्यूजलेटर को लागी - तर आज सम्म, एक मात्र राम्रो प्रदर्शन गरेको छ। अवश्य, हामी यहाँ ईमेल ठेगानाहरूको ट्रिकल पाउछौं र त्यहाँ हामीले प्रयोग गर्ने उपकरणहरूको साथ। र हामी ईमान्दारीसाथ आगन्तुकहरूलाई स्वीपटेकहरू र गीवेजको सदस्यता लिन लोभ्याउने योजनाहरू बेवास्ता गर्दछौं। हामी वास्तविक ग्राहकहरू चाहान्छौं जसले सदस्यता लिन्छन् किनकि उनीहरूले ल्याउने मूल्यलाई चिन्दछन्। हाम्रो न्यूजलेटर सधैं बिक्री र मार्केटिंग पेशेवरहरु लाई अनुसन्धान, पत्ता लगाउन र मार्केटिंग टेक्नोलोजी कसरी प्रयोग गर्ने व्यापार परिणाम सुधार गर्न को लागी विभिन्न सामग्री प्रदान गर्दछ।
A स्वागत चटाई एक पूर्ण पृष्ठ फ्रेम छ जुन नयाँ आगन्तुकहरूको लागि देखा पर्दछ, पृष्ठ तल साइट पुश गर्दछ, र आगन्तुकलाई सदस्यता लिन सोध्छ। हाम्रो साइटमा, यस्तो देखिन्छ:
यो मात्र काम गर्दैन, यो आश्चर्यजनक राम्रो काम गर्दछ। जबकि अन्य रणनीतिहरूले हामीलाई एक महिनामा दुई दर्जन ग्राहकहरू प्राप्त गर्ने छ, हाम्रो वेलकम म्याटले हामीलाई केही दर्जन ग्राहकहरू प्राप्त गर्दैछ प्रत्येक दिन। वास्तवमा, एक दिन हामीसँग १०० भन्दा बढी सदस्यहरू अप्ट-इन थिए। हाम्रो वेलकम म्याट हामीले तैनात गरेको कुनै पनि अन्य रणनीति भन्दा १०० गुणा बढी रुपान्तरण हुँदैछ।
पपअप जस्तो छैन जुन व्यक्तिले पढ्न सुरू गरे पछि रोक्छ, यो विधिले उनीहरूलाई सदस्यता लिनको लागि उनीहरूलाई सुरू गर्नु अघि अनुरोध गर्दछ। यदि तिनीहरू चाहँदैनन् भने, तिनीहरू केवल हैन वा पृष्ठ तल स्क्रोल गर्नुहोस्। प्लेटफर्मले हामीलाई फेरि अप्ट-इन देखाउन ढिलाइ गर्न अवसर पनि प्रदान गर्दछ। र हामी अपग्रेड गरिएको टूलसेटको साथ बिभिन्न संस्करणहरू परीक्षण गर्न सक्दछौं कि एकबाट अर्कोमा राम्रो काम गर्छ कि भनेर।
SumoMe को साथ तपाईंको वेबसाईटको नेतृत्व बढाउनुहोस्
यो स्वागत छ चट तपाइँको वेबसाइट रूपान्तरण दरहरू वृद्धि गर्न केवल धेरै कार्यात्मक र प्रभावकारी उपकरणहरू मध्ये एक हो। SumoMe ट्राफिक उपकरणहरू अब स्थापना गरियो र २००,००० भन्दा बढी वेबसाइटहरूमा कन्फिगर गरिएको छ! र सबै भन्दा राम्रो - प्लेटफर्मले एक दर्जन भन्दा बढी उपकरण प्रदान गर्दछ तपाइँलाई रूपान्तरण ड्राइभ गर्न र तपाइँको साइटको प्रदर्शन वृद्धि गर्न मद्दत गर्न।
यदि तपाइँ वर्डप्रेस साइट चलाइरहनुभएको छ भने, SumoMe ले तपाइँलाई सजिलैसँग सुरू गर्न WordPress WordPress प्लगइन पनि प्रदान गर्दछ। SumoMe सँग क्रोम प्लगइन पनि छ, उनीहरूको उपकरणमा पहुँच गर्न बटनको क्लिक जत्तिकै सरल। सबै भन्दा उत्तम, तिनीहरू जहिले पनि तपाईंको ईमेल सूची बढाउन नयाँ तरीकाहरू थप्दै छन्, सामाजिक साझेदारीलाई प्रोत्साहित गर्दछन्, र उनीहरूको माध्यमबाट तपाईंको साइटको प्रदर्शन मापन गर्नुहोस्। विश्लेषण उपकरणहरू।
हामीले सुरु गर्न SumoMe सँग साझेदारी गरेका छौं - एक दर्जन उपकरणहरूमा पहुँच गर्नका लागि अहिल्यै साइन अप गर्नुहोस् कुनै लागत छैन!
नि: शुल्क SumoMe प्रयास गर्नुहोस्!
डीन ओक्स (@deanoakes91)
राम्रो काम डगलस। मैले ट्विटरमा लिङ्क क्लिक गरें र निश्चित रूपमा तपाईले लेख्नु भएको धेरै स्वागत म्याटले स्वागत गरेको थियो। यो म त्यहाँ हेर्नको लागि भएको सामग्रीको बाटोमा पर्दैन तर अझै पनि अत्यधिक दृश्यात्मक छ।
मैले वास्तवमा मेरो इमेल ठेगाना राखेको छैन, तर तपाईले मलाई अर्को पटक पाउनुहुनेछ 😉
के तपाईंले A/B ले प्रयोगकर्ताले वेबसाइट छोड्दा देखा पर्ने लीड क्याप्चर स्क्रिनको परीक्षण गर्नुभएको छ? ("वेलकम म्याट" जस्तो फुल स्क्रिन उदाहरणका लागि "बाय-बाय म्याट" बन्नेछ 😉)
किन कि मैले थाहा पाइनँ किन एक प्रयोगकर्ता, पहिलो पटक पोस्ट पढ्नको लागि तपाईंको वेबसाइटमा आइपुगेको, तुरुन्तै आफ्नो इमेल ठेगाना दिएर त्यो पोस्ट पढ्ने अवसर "गुमाउन" जोखिममा पर्नेछ (र सम्भावित रूपमा कुनै अन्यमा पुन: निर्देशित गरिनेछ। पृष्ठ) पहिले पोस्ट पढे बिना नै यसको गुणस्तर यसको इमेल ठेगाना छोड्न लायक छ कि भनेर जान्नको लागि।
यदि तपाईंले पहिले त्यो A/B परीक्षण गर्नुभयो भने, तपाईं कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ कि मानिसहरू तपाईंको सामग्री पढ्नु भन्दा पहिले आफ्नो इमेल ठेगाना छोड्न इच्छुक हुन सक्छन्?
रोचक, टोनी। म कुनै पनि हिसाबले वेब डिजाइनमा विशेषज्ञ होइन। यदि तिनीहरूले साइट छोड्दैछन् भने तपाइँ यसलाई कसरी लागू गर्ने बारे जानुहुन्छ? तिनीहरूले "x" क्लिक गर्दा पप-अपको साथ?
हे डीन, प्रयोग गरिएको रणनीति भनिन्छ निकास आशय, यो मूलतः स्क्रिप्ट हो जसले माउस सूचक गति र दिशा अवलोकन गर्दछ। जब व्यक्तिले माउसलाई ठेगाना पट्टी वा पछाडि बटन तिर धकेल्छ, एक पपअप उत्पन्न हुन्छ।